A world map of the 2019 Corruption Perceptions Index by Transparency International which measures "the degree to which corruption is perceived to exist among public officials and politicians". High numbers (blue) indicate less perception of corruption, whereas lower numbers (red) indicate higher perception of corruption.
၁၉၉၅ ခုနှစ်မှစ၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မှ စီပီအိုင် (Corruption Perceptions Index, CPI) ဟု ခေါ်သည့် အဂတိ လိုက်စားမှု နိုင်ငံများ နှိုင်းယှဉ်စာရင်း ကို နှစ်စဉ်ဖော်ပြလေ့ရှိပြီး၊ နိုင်ငံများ၏ အဂတိလိုက်စားမှုအခြေအနေများကို ကျွမ်းကျင်လေ့လာသူများ၏ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် အများပြည်သူ့ သဘောထား စစ်တန်းများအပေါ် မူတည်ကာ အမှတ်ပေးစနစ်ဖြင့် ဖော်ပြသည့်စာရင်းဖြစ်သည်။စီပီအိုင်မှ အဂတိလိုက်စားခြင်းဆိုသည်မှာ အများပိုင်အာဏာကို မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက် အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်ခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်သည်။
123 ဖိုင်:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg ဟွန်ဒူးရပ်စ်
၈၃ တရုတ် ၃၇ ၁ ၃၆ ၄ ၄၀ ၁ ၃၉
၁၀၇ တိုဂို ၃၂ ၃ ၂၉ ၀ ၂၉ ၁ ၃၀
၁၁၂ ဖိုင်:Flag of Honduras (2008 Olympics).svg ဟွန်ဒူးရပ်စ် ၃၁ ၂ ၂၉ ၃ ၂၆ ၂ ၂၈
၁၁၂ မာလဝီ ၃၁ ၂ ၃၃ ၄ ၃၇ ၀ ၃၇
၁၁၂ မော်ရီတေးနီးယား ၃၁ ၁ ၃၀ ၀ ၃၀ ၁ ၃၁